DHIBEE QAAMA SAALAA – Beekan Guluma Erena
DHIBEE QAAMA SAALAA	Beekan Guluma Erena
Education April 24, 2016BEEKAN GULUMMAA
201SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
DHIBEE KA’UU DADHABUU QAAMA SAALAA DHIIRAA (IMPOTENCY)
Dhibeen ka’uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa ykn erectile dysfunction or impotence jedhamu, maalii? Maalirraa nama qabaa? Furmaanni isaahoo? Mee gabaabaatti waliin haalaallu!
Qaamni saalaa dhiiraa kan dhaabbatu (erection) yoo hormooniin sammuu keessaa gadi lakkifamee ujummoolee dhiigaa qaama saalaa dhiiraa keessatti argaman dhiigaan guutuudhaan dhiibbaa (pressure) uumudha. Haalli kamillee kan kana dangeessu, qaamni saalaa dhiiraa dhaabbatee walqunnaamtii akka hin raawwanne dhorka: osoo fedhii qabuu jechuudha. Yoo fedhii hin qabaanne garuu inni kan biraati malee dhukkuba kanaan walqabachuu dhiisuu danda’a (decreased libido).
Dhibeen kun akkuma umuriin dabaleen dabalaa deema. Giddu galeessaan dhiirota waggaa 40 keessaa 5% yoo hubu, warreen waggaa 70 ga’an keessaa ammoo haga 15% hubuu danda’a.
Dhibee kana kanneen namatti fidan keessaa.
1. Rakkoo xiinsammuu (psychological problems). Kun yeroo hedduu namoota saalqunnaamtii waliin walqabatee miidhama, sodaaa fi kkf qaban.
2. Dhukkuba sukkaaraa
3. Tamboo xuuxuu
4. Dhukkuba narvii
5. Qorichoota adoochan kan akka hashiishii fi kkf.
6. Qorichoota dhukkuba biraa yaaluuf ajajaman kan akka, antihypertensive, antihistamine, antidepressants, etc.
7. Depression (among psychiatric problem) fi kanneen biroon illee in jiran.
Furmaanni rakkoo kanaa yeroo ammaa qorichoonni garaagaraa jiraatanis yeroo baay’ee sildenafil (viagra) akka ball’inaan fayidaarra oolaa jiru beekamaadha. Qoricha kana ajaja ogeessaa fayyaatiin qofa fayyadamna. Miidhaawwan cinaa (side effects) qorichi kun qabu keessaa:
 mataa dhukkubbii,
 gadteessisuu (diarrhea),
 garaacha dhukkubsuu (dyspepsia),
 oldeebisuu (nausea). Fi kkf.
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa201SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← ILAALCHA QAJEELAA UUMMACHUU
FAAYIDAA DUBBISUU-Dhalli namaa maaliif kitaabota dubbisuu qaba kan jedhuuf fallisaa kunooti. →